Studios Iibka iyo Ijaarka gudaha World Wide
Xulo qaybAccommodations Spare roomsResidential homes ApartmentsBusiness Directory Financial Service Providers Home Improvement Contractors Construction Companies Design ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents
Guryaha istuudiyaha - Guryaha ugu yar ee iskood u taagan waxaa loo yaqaan 'istuudiyo, karti ama guryo bachelor ah oo ku yaal Mareykanka, ama falanqeeyaha istuudiyaha ee Boqortooyada Midowday. Kuwaani badanaa waxay ka kooban yihiin hal qol weyn oo waaweyn oo u dhaqma sida qolka fadhiga, qolka cuntada iyo qolka jiifka oo isku dhafan oo waliba badanaa ku jira qalabka jikada, oo leh musqul yar oo gaar ah. Sariirta jiifku waa nooc kala duwan oo Boqortooyada Midowday (UK) oo ku kala yaal aqal qol keliya ah kaasoo ku lug leh tas-hiilaad musqusha oo lala wadaago sariiraha kale. Kuuriya, ereyga hal qol (qol qol) waxaa loola jeedaa guri istuudiyaha ah.  Ka soo guurka kuwan waa guryo hal qol ah, oo qol jiif uu kaga duwan yahay guriga intiisa kale, oo ay ku xigto labo qol, saddex qol, iwm . Guryaha la kireysto ee yaryar badanaa waxay leeyihiin hal soo galo oo keliya. Guryaha waaweyni badanaa waxay leeyihiin laba albaab, laga yaabee albaab hore iyo mid gadaal ah, ama guri hoosaad ama qaab kale oo baarkin ku dhagan. Waxay kuxirantahay naqshada dhismaha, albaabada laga soo galo waxaa si toos ah loogu xiri karaa banaanka ama aag caan ah oo gudaha ah, sida hoolka ama qolka jiifka.
Dhammaan qeybahaDegaannoGuryaha la degan yahayTusaha GanacsigaTusaha Wakiilaha Guri Guri